Vanyori Vakanaka veAmerica: Izvozvi uye zveNguva ino Zvazvino Zvinyorwa
Alberto Makumbo | | Vanyori, dzakawanda
Kunyangwe iine ipfupi nhoroondo ichienzaniswa nenyika dzenyika yekare, United States inotsanangura chikamu chemamiriro azvino muWest. Shanduko iyo idzi vanyori vakanaka veAmerica zvakaratidzirwa mumakore mazana maviri apfuura achiridza chinzvimbo mutsika uye kufunga kwenyika iriko parizvino inotongwa naDonald Trump.
Inofungidzirwa imwe yeiyo vanyori vakakura vezana ramakumi maviriHemingway aive mushingi, murume anokwanisa kutsvaga nzvimbo nyowani kupasi kuburikidza nenyaya dzake. Yakafemerwa zvine simba neanonzi "chizvarwa chakarasika" chakaumbwa nevanoenda kunze kwenyika avo, saiye, vakarwa muHondo Yenyika Yekutanga, Hemingway akatumira kunze mufananidzo weiyo folkloric Spain mubhuku rake. Fiesta, kubwinya kweguta guru reFrance re Paris yaive pati kana zviitiko zvemuAfrica zve Chando cheKilimanjaro. Kuda kwake gungwa kwaizomuendesa kuCuba, kwaaizonyora basa rake rinozivikanwa, Chembere negungwa, rakaburitswa muna 1952. Kwapera gore, munyori aizohwina Mubayiro weNobel muMabhuku mukucherechedza basa rake rese.
Wahwina weNobel Prize muMabhuku muna 1949, Faulkner aive mumwe we America vekutanga zvinyorwa zvemazuva ano nekutora nzira dzekurondedzera kubva kuvanyori veEuropean vakaita saVirginia Woolf kana James Joyce. Basa rake, rinozivikanwa nedikidiki rakangwarira, mitsara mirefu uye miedzo mitsva senge yemukati monologue, yakaumbwa nemabasa akadai Ruzha nehasha, yakanangana nemhuri yakashata yeCompson, kana ngano mbiri dzakapindirana dze Miti yemichindwe yemusango, kuwedzera kune kusingaperi kwe nyaya pfupi inosanganisirwa muunganidzwa wake Dzakaunganidzwa nyaya.
Inofungidzirwa naWilliam Faulkner sa "baba vezvinyorwa zveAmerica", Twain aive mumwe wevanyori vakakurumbira venguva yake, kunyanya mushure mekuburitswa kwenyaya yechisimba Datya rakakurumbira rekusvetuka kweCalaveras County muna 1865, izvo zvakakwezva kutarisisa kwenyika yese. . Inozivikanwa nekushoropodzwa kune inotonhorera uye yakawanda yakasarudzika nyika yevakuru, basa raTwain rakasiya kumashure ezvinyorwa zvino Muchinda neMurombo o Zvakaitika kuna Tom Sawyer, iyo yakateverwa nemutowo wayo The Adventures of Huckleberry Finn.
Makore zana nemakumi mashanu apfuura, chiitiko chekunyora hachina kunzwisisa vakadzi vanyori, mamiriro aigona kuremedza chikamu chekuvapo kweimwe yeiyo vadetembi vakuru venhoroondo: Emily Dickinson. Eccentric uye yakachengetedzwa, munyori akapedza chikamu chemakore ekupedzisira ehupenyu hwake akavharirwa mukamuri achiunganidza kusvika 1800 nhetembo ayo gumi nemaviri chete akaburitswa munguva yehupenyu hwake. Neraki, nguva yakatitendera kununura mamwe emabasa makuru aDickinson, ese akafuridzirwa nerudo, kuseka kana Bhaibheri uye anozivikanwa nemitsara mipfupi kana nhetembo dzisina kukwana dzakatungamira vamwe vevagadziri kugadzirisa nhetembo dzakaburitswa. Muhupenyu.
Kunyangwe isina bhuku rakakura, Lee anozivikanwa nekugadzira iyo ndeimwe yeiyo mabasa makuru ezvinyorwa zveAmerica: Uraya Mockingbird. Semhedzisiro yehudiki yakaratidzirwa nemiyedzo iyo baba vake vakatora chikamu uye vaiperekedzwa neshamwari yake Truman Capote, Lee akataura chikamu chechiratidzo chake pa misoro senge rusaruraganda kana machismo kune rimwe basa rinokudza chimiro chemutambi waro, gweta Atticus Finch, zvichimuita gamba renyika murudzi zvichidikanwa mumakore gumi sema60. Gwaro rekutanga rebasa, Enda unonyorera murindi, rakaburitswa muna 2015, gore pamberi pekufa kwaLee.
Eccentric uye kunyanya, Capote akakurira mumapurazi akasiyana kumaodzanyemba kweUnited States kwaakatanga kunyora senzira yekurerutsa kuzviparadzanisa. Atova mukuyaruka kwake, kubudirira kwenyaya dzake dzekutanga kwakamupa zita remadunhurirwa rekuti "mudzidzi wePoe", danho raizobatana nekubudirira kwe Kudya kwemangwanani nemadhaimani, rakaburitswa muna 1958 uye rakashandisirwa bhaisikopo muna 1961. Zvisinei, kubudirira kwayo kukuru kwaizove Kutonhora-ropa, rakaburitswa muna 1966 kuferefetwa kwakadzama uko kwakamisa mbiru dzeyainzi "utapi venhau hutsva."
Hupenyu hwaSteinbeck aigona kuve akafuridzira bhuku pacharo: kubva kubasa kwake kumapurazi eCalifornia uko akasangana neicho chaicho chevatorwa, kune zvaakaona muNew York achitora chikamu mukuvakwa kweMadison Square Garden, John Steinbeck akazomira. California, uko mushure mekurarama mukubatsirwa munharaunda pamwe nemukadzi wake akatanga kunyora mamwe emabasa ake makuru. Pakati pezvakakosha pane Kumabvazuva kweeden, Parera kana, kunyanya, Mazambiringa eHasha, X-ray yeGreat Depression iyo muma30 yakakurudzira mhuri zhinji kubva mukati meUnited States kutamira kuCalifornia, yaifunga nyika yemikana. Munyori akakunda iyo Mubayiro weNobel muMabhuku in 1962.
Pamberi pevanyori vese vekuAmerican vezana ramakumi maviri emakore, Poe akadyara mbeu yemunyori anozvigutsa, kana uyo anozviti anorarama pane zvinyorwa zvake pamusoro pezvose. Yakaratidzirwa nehucheche hwakaomarara, kupindwa muropa nedoro nezvinodhaka kana kuyedza kwakasiyana kwekuzviuraya, Poe akasvipa chikamu chechisiko chake musarudzo dzenyaya dzakadai Iyo Ndarama Bug o Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa. iyo yaizoisa hwaro hwe Anonakidza mabhuku yakaenderera mberi nevamwe vanyori makore akazotevera.
Kana paine munyori wepanguva ino anokwanisa kumonyanisa kutya kukuru kwevanhu, ndiStephen King, «tenzi wekutya»Uye munyori wemabasa anosvika makumi mashanu akanakirwa neruzhinji. Kunyangwe nzira dzake dzisina kujairika pakunyora zvinyorwa zvake dzakashoropodzwa nenyanzvi, King akwanisa kugadzira mabasa senge Nhamo, It, Makuva emhuka, Carrie o Kupenyachaiwo echinyakare ezvino zvinotyisa zvinyorwa, mazhinji acho akagadziridzwa kune hombe skrini ine rakakura bhokisi hofisi kubudirira.
Ndeapi akanyanya vanyori vekuAmerica kwauri? Nderipi remabhuku ake raunonyanya kufarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Vanyori Vakanaka veAmerica
Ivo baba vangadai vakashaikwa parizvino mhosva yematsotsi, James Ellroy.